Vaovao - Ahoana no hisafidianana firavaka amin'ny fivoriana fanao isan-taona?
Misy antsipiriany bebe kokoa mandeha amin'ny Alibaba-anay: https: //maijiao.en.alibaba.com
24 RESIN'NY RHINESTONE ROW TSY MISY RHINESTONE
Ahoana ny fomba hisafidianana firavaka amin'ny fivoriana fanao isan-taona?
Rehefa ho avy ny Fetin'ny Lohataona, inona no halefa any amin'ny TA hampifaly azy na dia mitsiky eo imasony aza? Lingling dia milaza aminao fa ampy ny firavaka vatosoa. Ny dikan'ny firavaka samihafa dia maneho teny miafina fitiavana. Azonao fantarina ve raha afaka maminavina tsara ny TA?
Vakana - Fitiavana
Iza amin'ireo tovovavy tsy tia tantaram-pitiavana? Amin'ny fotoana mety fotsiny dia andefaso rojo voafantina tsara izy. Ankoatry ny "fitiavam-pitiavana" homophonic, ilay rojo koa dia misy fitiavana hafa koa, "Te hamatotra mafy ny fonao amin'ny rojo aho fa tsy halain'ny olon-kafa." Fanambarana marefo sy manjaka toy izany dia azo antoka fa mamy ny fony.
Vovoka mavokely kristaly mamy ary tsy matavy, toy ny fifandraisana mamy eo amin'izy roa, misy miankina amin'ny voninkazo tsara tarehy, Crystal Jade ity andiana rojo mozika jade ity dia tena mety amin'ny sakaiza.
Fehin-tànana - Mpiambina
Iza amin'ireo tovovavy no tsy te hanana fitiavana maharitra? Angamba tsy azo soloina ny toerana misy azy ao am-ponao, ary matotra sy be fikarakarana koa ny fihetseham-ponao. Na izany aza, mila maneho hevitra ianao, ampahafantaro azy, ary avelao izy hahatsiaro ho maivamaivana. Alefaso haba izy, midika hoe "vonjeo ny fitiavana," maneho ny faniriany hamatotra azy mandritra ny androm-piainany ary handany ny andro sisa amin'ny fiainany.
Aleo mandefa ny bracelet amethyst kristaly, ny amethyst no "vato mpiambina ny fitiavana", midika endrika tsara, tsotra sy malefaka, noho izany dia tsara tarehy sy tsara tarehy kokoa izy.
Rings - Ring for Love
Iza amin'ireo tovovavy no tsy te hanana fanoloran-tena mandritra ny androm-piainany? Raha izy no olona tianao “hihazonana ny rantsan-tananao, ajanony ny fahanterany,” aza avela hiandry ela izy, mitafy peratra ho azy, ary maneho ny fiteniny tso-po sy tso-po indrindra hoe “tiavo izy. Ao am-poko dia vonona ny hiala aho noho ny fitiavany, ”manome azy fanambadiana sambatra.
Manaova peratra am-po Ruby kristaly, izay hifanekena ny fitiavana sy ny fanoloran-tena avy.
Fetibe, alefaso ny firavaka vatosoa kristaly ao aminy
Ny fanomezana dia tsara sy misy dikany
Zava-dehibe ny hampifaliana azy
Inona no mety kokoa noho izany?
Fotoana fandefasana: Jun-20-2018
Adiresy:Foibe: No. 16, Waidaling, Daling Village, Yisanli Street, Yiwu City, Faritanin'i Zhejiang, Sina
Telefaona maimaim-poana: 0086 13958400086